Na-agba ụda n'oge ọkọchị site na akwụkwọ 7 mara mma na obere egwu egwu | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Emelitere na 03/09/2018 18:48 | Ndị edemede, Akwụkwọ, Novela, Akụkọ, oké ụjọ
Oge okpomọkụ dị. Ọ bụ eziokwu na afọ a ewerela obere oge ịbịa na enwere m ọmarịcha oge nke oyi na mmiri ozuzo ebe niile. Ma ugbu a. Bia calor, que n'ihi na m na ọ bụ synonymous na ụjọ na hell, ọ bụ ezie na a mụrụ m na July 5. Ọ ga-abụ ọnwa abụọ ma ọ bụ atọ nke ọsụsọ na ebe obibi n'ọchịchịrị na ikuku ikuku.
Ma n’ikpeazụ, ọ bụ ihe ọ na-emetụ. Nke bu eziokwu bu na achoghi m itu ujo mgbe m guru, ma ekwerem na oge ufodu adighi ewute ya na otutu ndi ogugu na amasi ya. Ya mere, kelee oge ọkọchị, ha na-aga aha egwu ole na ole. Veredsọpụrụ ochie nke Stoker, Poe ma ọ bụ Stevenson, ụfọdụ ụjọ na Roman Hispania na ụfọdụ ngwakọta nke akụkọ sayensị na-atụ egwu atavistic.
1 Burrow nke White Worm - Bram Stoker
2 Snowy Hel - Ismael Martínez Biurrun
3 Gothic Frenzy - Ndị edemede dị iche iche
4 Mwakpo nke Oke - James Herbert
6 Gburugburu nke anụ ọhịa wolf - Antonio Calzado
7 Akụkọ zuru ezu - Edgar Allan Poe
Burrow nke White Worm - Bram Stoker
Dracula ikekwe kpuchiri ọrụ ndị ọzọ nke onye edemede Irish a. Ma Burrow nke White Worm nwere oghere pụrụ iche maka m. Oge izizi m kpọtụrụ akụkọ a bụ radiophonic Na mgbe m gụrụ ya mgbe e mesịrị, enwere m mmasị na ya. N'ezie, o metụtakwara ụfọdụ akụkọ ojii m.
Stoker bipụtara ya ugbua 1911, mgbe ọ na-arịa ọrịa ma nwee nnukwu nsogbu akụ na ụba nke ọ na-enwe mgbe niile. Ya mere ọ bụ akwụkwọ akụkọ ikpeazụ ya n’ihi na ọ nwụrụ n’afọ na-eso ya. Ọ bụ kwuru na ọ dere ya n'okpuru nduzi nke ọgwụ na na ọ bụ a ntụrụndụ nke English akụkọ nke Lambton irighiri. Nke ahụ bụ aha nke ihe e kere eke ọkara agwọ na ọkara dragọn, onye biri n'ime olulu mmiri. Stoker weghachitere akụkụ ndị a dị egwu na nke dị egwu na mgbakwunye na itinyekwu atụmatụ ndị ọzọ na aghụghọ ọhụrụ, mmegwara na mmekọrịta ịhụnanya.
Ma na ndabere bụ kpochapụwo alụ ọgụ n’etiti ezi ihe na ihe ọjọọ, bụ onye Adam Nwoke, onye Australia bara ọgaranya, na Lady Arabella Machị, agbata obi ya na ulo ozo ozo di na etiti obodo England na nwanyi nke mara nma dika ihe omimi na, n'ikpeazu, uzo mmadu nke na-adighi nma ma na-egbu egbu nke ikpuru nke aha.
Na 1988 onye isi Britain Uchechukwu russell mere ụdị ihe nkiri nnọọ free na Hugh nyere dị ka protagonist.
Igwe snow - Ismael Martínez Biurrun
E dere na 2006 bụ akpa akwụkwọ nke onye edemede a na onye edemede ederede site na Pamplona. N'ime ya ọ na-agwa anyị akụkọ banyere Caelius Rufus, a vetiran nke ndị Legion, onye bụbu odeakwụkwọ na ndị agha nke Pompey the Great. Ma ugbu a Celio na-ebi na ọnọdụ ụjọ na-adịgide adịgide yana ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye nzuzu. Ọ chọrọ ichefu mana ọ chọkwara ịkọ ihe mere ya na Hispania. Mgbe ọ zutere onye agha ndị agha ọzọ, onye lanarịrị ihe ọjọọ ndị ọ hụrụ, ọ nwere ike ime ya n'ikpeazụ.
Ya mere, anyị chọpụtara ihe mere na udu mmiri nke afọ 75 BC na Hispania, na nkwụsị n'ọgụ dị n'etiti Pompey na onye nnupụisi Sertorius. Anyị ga-ama akụkọ banyere Tribune Arrans, nwoke jidere n'etiti iguzosi ike n'ihe ya na Rom na mmalite Basque. Na ncheta nke Celio, anyi g'abia ozi ahu nke Arranes na eme dika ugwu, ebe ya na ndi ya ga ezute oké ụjọ nke oge ochie na-ezo n'ime ohia.
Ezigbo iwe - Dị iche iche na-ede akwụkwọ
Vallọ ụlọ ọrụ Valdemar bụ akara aka na akwụkwọ egwu na olu ahụ na-ewetara anyị nhọrọ nke 7 akụkọ nke kacha mara njirimara nke genre nke akụkọ gothic. Ha bụ:
Maddalena ma ọ bụ akara aka nke Florentines, nke Horace Walpole dere.
Nymph nke isi iyi, nke William Beckford dere.
Anaconda, nke Matthew G. Lewis dere.
Ndị Vampire, nke John W. Polidori dere.
Daalu, nke Thomas de Quincey dere.
Leixlip Castle, nke Charles R. Maturin dere.
Nrọ ahụ, nke Mary Shelley dere.
Mwakpo nke oke - James Herbert
Onye edemede Bekee a rụrụ ọrụ onye ukwe na mgbe e mesịrị dị ka onye nduzi nka site na ụlọ ọrụ mgbasa ozi. Na 1977 o kpebiri inyefe onwe ya ide ihe kpamkpam. A maara ya karịsịa maka ya arụ ọrụ raara nye ụdị egwu. Ewerela ọtụtụ akwụkwọ akụkọ ya na fim, telivishọn, redio na ụwa nke egwuregwu vidio, dị ka nke a.
Ngwakọta nke sayensị akụkọ ifo ụjọ akwụkwọ anụmanụ ndị a kpakpando, oke, nke sitere na ngbanwe di iche, buru ihe ojoo na gigantic ndi na eri nri na aru mmadu, wakporo obodo London ma rie ndị bi na ya. Na ihe ndi ozo nke egwu, anyi nwere ihe omuma nke ndi mmadu na akuko ha, dika nke nwoke idina nwoke ma obu nwoke na nwanyi. Rda ụda ya na-edugakwa na esemokwu na-aga n'ihu nke na-ejide ọnyà onye na-agụ ya.
Onye uku onye edemede Scottish bu uzo ozo di iche iche Ola bụ a akụkọ egwu bipụtara na Fantastic Stage Collection of 1897: Ndị nwere obi ụtọ na akụkọ ifo na akụkọ ifo ndị ọzọ, nke ahụ pụtara obere oge Ọnọdụ dị iche iche nke Dr. Jeckyl na Maazị Hyde.
Akụkọ a bụ nke a subrekere ewu ewu n'oge Victorian oge, ndị Shilling Shocker, nke, n'ozuzu, ka atọrọ n'ime nhazi nke mpụ na ime ihe ike. Ya protagonist bụ a merụrụ agha, onye na-aga Spain iji naghachi. N'ebe ahụ, ọ na-ezute a nwa agbọghọ dị omimi ma maa mma, Olalla, ada onye obia ya, na otu ezin’ulo na-ezobe a ihe ojoo nzuzo.
Gburugburu nke anụ ọhịa wolf - Antonio Calzado
Calzado bụ onye edemede Cordovan nke na-agagharị n'ime akwụkwọ akụkọ ihe mere eme nwere ọtụtụ echiche efu na ụjọ. N'akụkọ a, onye isi akụkọ, Daniel, hụrụ alụmdi na nwunye ya kwụsịrị mgbe nwa ya nwanyị nwụrụ. Ọ na-anọrọ onwe ya naanị ya ruo mgbe ọ natara akwụkwọ ozi sitere n'aka nwanne nna ya bụ Anxo, onye na-elekọta obodo n'obodo Galician, onye nyere ya ezumike ebe ahụ. Daniel banyere n'otu nnukwu ụlọ nke nwanne nna nna ya nwere, onye nwa ya nwoke nwere mmasị na lycanthropy. Mgbe ahụ, na mberede, usoro nke igbu ọchụ na-emetụta ndụ obodo ahụ.
Akụkọ zuru ezu - Edgar Allan Poe
Ma olee otu Nna-ukwu Poe ga-efu na nhọpụta aha egwu a? Ndị a Akụkọ zuru ezu weta ngụkọta nke iri asaa n’ime ha bụ ndị kachasị kpochapụwo dịka Ihe odide ederede achọtara na karama, Berenice, eze ihe otiti, Ligeia, mpụ nke rue Morgue, Ekwensu na ụlọ mgbịrịgba, Ọdịda nke oflọ Usher, Eleonora, Well and Pendulum, The Tell-Tale Heart, The Mask of the Red Death, The Oval Portrait, The Black Cat, The Gold ebe o Gbọmgbọm nke amontillado.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » ụdịdị » oké ụjọ » Na-agba n'oge ọkọchị na akwụkwọ egwu egwu 7 mara mma na obere egwu
Tweet: Ihe omuma akwukwo ohuru?